Thiha Soe – Trainer & Speaker – Built with Web Master
226+227, Seaview Condo, Kannar Road, Yay Pone Ward, Myeik
Thiha Soe - Trainer & Speaker
Transformational Better Youth (TBY) Training
TBY Training ဆိုတာက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူငယ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပေးဖို့အတွက် ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံအသစ်နဲ့ ထပ်လုပ်မယ့် TBY Training မှာ ဘာတွေသင်မှာလဲ?
▶How To Be A Powerful Communicator
▶Building Your Confidence
▶Weel Of Life
▶လူ ချစ်ဆေး (၅) မျိုး
▶The Importance Of Being Playful
▶Wait A Sec….
▶Self Love Goals
▶ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို သတိထားကြည့်သင့်သည့် အချက်များ
▶Challenge ဖြင့် ငွေစုနည်း (30)Day Plan
▶Challenge ဖြင့် ကျန်းမာအောင်နေထိုင်နည်း (30)Day Plan
စုစုပေါင်း လက်တွေ့ကျတဲ့ သင်ခန်းစာ (၁၇)ခုကို သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Water, Book, Pen, Bag, Certificate, Lucky Draw, Suprise, တို့ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး Entertainment, Game, Activity တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လက်တွေ့ တက်ရောက်သင်ကြားရမယ့် Training မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
စာပေဟေါပြောပွဲလိုမျိုး ထိုင်နားထောင်နေရမယ့် Training မျိုး လုံးဝလုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ တက်ဖူးသူတွေ သိပါတယ်။ နားရက်လေးကို အပန်းဖြေ ဖို့ ခရီးထွက်စရာမလိုဘူး ဒီ Training လေး လာတက်လိုက်ရင် အရမ်းပျော်ဖို့လဲ ကောင်းပြီး အကျိုးရှိမယ့် Training ဖြစ်ပါတယ်။
Training Date – 16-2-2020(Sunday)
Training Time – 8:30 AM – 1:00 PM
Location – Hotel Grand Jade, 4th Floor, Ballroom
(သင်ကြားရေးအတွက် အချိန်ထပ်တိုးရန် လိုအပ်ပါက အနည်းငယ်ထပ်တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ BreakTime အနားယူချိန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအစီအစဥ်ဖြင့် စားသောက်ရပါမည်၊ Training မှ မကျွေးပါ။ ထမင်းဗူးယူလာနိုင်သလို ခန်းမ Center အတွင်းမှ ဆိုင်များတွင် စီစဥ်နိုင်ပါသည်)
ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဥ်များလဲ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တိုင်းအတွက် စိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး အကျိုးရှိတဲ့ Training ကြီးဖြစ်လို့ တက်ရောက်ဖို့ကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီ Training ကို အသက် (၇)နှစ်မှ အသက်(၄၅)နှစ်အထိ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသူများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး – ၁၀၀၀၀ ကျပ်
(လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပြီး ၂ လပိုင်း ၁၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီတွင်သာ ကြိုတင်စာရင်းသွင်း အပ်နှံထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နောက်ကျသူများအား လက်ခံပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ)
ဒီ Training ကို Youth Training School Team မှ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လူငယ်အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက်ကောင်းများစွာဖြင့် ပြုလုပ်လာသည်မှာ ယခုအကြိမ်သည် (၇)ကြိမ်မြောက် Traninig ဖြစ်ပါသည်။စာရင်းသွင်းအပ်နှံရန်အတွက်
B-226, Seaview Mall, Myeik
09684441008(9am – 7pm)
09779799919(9am – 9pm)
Chat Box (24hours)👇
Name & Phone ပေးပြီး ကြိုတင်စာရင်းသွင်းလို့ရပြီ….
(Part Time Own Business Plan)
☣ PTOB Batch-2 ကို (2-2-2020) Sunday မှာ3PM ကနေ5PM ထိ ထပ်လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
☣ PTOB သင်တန်းက ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ အပိုဝင်ငွေ ဘယ်လိုတွေ ရှာလို့ ရနိုင်လဲဆိုပြီး သင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
☣ သင်ပေးနေတဲ့ ပုံစံတွေက နေ့စဥ် Update ဖြစ်နေမယ့် အပိုဝင်ငွေရှာနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်တွေကို Share လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
☣ YTS Founder ကိုယ်တိုင် အစ လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ပုံစံတွေကို အတွင်းကျကျ သင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပြီး သင်ပြီးတာနဲ့ တန်းပြီး ဝင်ငွေရှာတတ်နေ အောင် သင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
☣ သင်တန်းတက်ပြီးသွားရင်လဲ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ကူညီပေးနိုင်ဖို့ Messenger Group က အဆင်သင့် ရှိနေမှာ ဖြစ်လို့ Help Center တစ်ခုလိုပါပဲ။
☣ PTOB ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် က ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်သတိမထားမိတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သတိထားမိပြီး အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီသင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
☣ သင်နိုင်မယ့်သူတွေက လက်ရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ အလုပ်တစ်ခု လုပ်နေရင်း အားတဲ့အချိန်မှာ အပိုဝင်ငွေရှာ ချင်တဲ့သူတွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
☣ ဒီသင်တန်းတက်ဖို့အတွက် ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အခြား ဘာလိုအပ်ချက်​မှ မသတ်မှတ်ထားလို့ ဘယ်သူအတွက်မဆို အဆင်ပြေတယ်။
☣ Mobile Phone တစ်လုံး ရှိနေဖို့ပဲလိုတယ်။ Data လေးတော့ ကြိုဖြည့်ထားပေါ့☺။
☣ သင်တန်းကြေး – ၃၅၀၀ ကျပ် (၃ထောင်၅ရာကျပ်)
☣ သင်တန်းလာတက်လျှင် ဗလာစာအုပ်နဲ့ ဘောပင်ယူလာရုံပဲ။
☣ Certificate လိုအပ်ပါက ထုတ်ပေးပါသည်။
☣ သင်တန်းတက်ရမယ့်ရက် – ၂-၂-၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ညနေ ၃ နာရီ မှ ည ၅ နာရီ အထိ (၂)နာရီ အတွင်း လက်တွေ့ သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ တစ်ရက်ထဲ တက်ရသော သင်တန်းဖြစ်သည်။ တစ်ရက်ထဲသာ တက်ရပါသည်။ သင်တန်းဆင်းတာနဲ့ အလုပ်တစ်ခု တန်းလုပ်နိုင်မည်။ အများကြီး သင်ပေးတဲ့အထဲက မိမိကြိုက်တာ တစ်ခုကို ချက်ချင်း လုပ်နိုင်ပါမည်။
☣ သင်ရမည့်နေရာ အခန်းအမှတ် (B-226, Seaview Mall, Myeik- YTS Classroom)
☣ သင်တန်းအပ်နှံလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် (09684441008, 09779799919) တို့ကို နာမည်စာရင်းပေး အပ်နှံနိုင်ပြီး အောက်ပါ Account ရဲ့ Chat box ကနေလဲ နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီး အပ်နှံနိုင်ပါတယ်။
☣ သင်တန်းအပ်နှံပြီးသူများကိုသာ Messenger Group ထဲကို ထည့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
👨‍💻Computer University & Youth Training School’s
👨‍💻TCT Training (Train To Your Brain – Change Your Mindset – Thinking Training)
👨‍💻Date: 18-1-2020 (Saturday)
👨‍💻Time: 9:00 AM
👨‍💻Location: Computer University Of Myeik
“စားသုံးသူများကို ဂရုတစိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံခြင်း” သင်တန်း
“ဒီဆိုင်က ဝန်ထမ်းတွေက စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမကောင်းဘူး၊ ဝန်ဆောင်မှုလဲ မကောင်းဘူး၊ စားသုံးသူတွေအပေါ် ဟိုလို ဒီလိုတွေ ဆက်ဆံတယ်၊ ဆိုင်ရှင်နဲ့ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဆင်မပြေလို့ နောက်မသွားတော့ဘူး” ဒါဆို ဘယ်သူနစ်နာသွားတယ်လို့ ထင်လဲ။ ဆိုင်ရှင်ရော ဝန်ထမ်းအတွက်ရော နစ်နာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေ ကြုံလာရပြီဆိုရင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လုပ်ငန်းခွင် အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားကို စိတ်ပျက်လာမယ်။ အလုပ်သမားအတွက်လဲ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုအတွက် အခွင့်အရေးတွေ နည်းပါးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
“စားသုံးသူများကို ဂရုတစိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံခြင်း” ဆိုတာ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုတာက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်မှာကိုက လူသားအချင်းချင်း တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးကြမှာပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအဆင်မပြေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့စားသုံးသူဖြစ်ရတာ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်သလဲဆိုတာ။
ကိုယ်ကိုတိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေမှ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းလုပ်နေမှ ဒါက အရေးကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် လူတိုင်းအတွက် ဒါဟာ အင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်လာပါပြီ။ လူတိုင်းလဲ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ကြုံဖူးကြမှာပါ။
လူတွေအားလုံးဟာလေ တစ်ချိန်ထဲမှာ ကိုယ်က စားသုံးသူ ဖြစ်သလို တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ တစ်ဘက်မှာ ကိုယ်က လုပ်ငန်းရှင်(ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ)တွေပါ။
ပြီးတော့ ယနေ့ခေတ်အလုပ်သမားတွေက ဒီအလုပ်ကနေ ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်ကို မထီလေးစား တစ်ခါစား ပုံစံတွေနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ သိထားရမှာက လူတွေနဲ့နေရင် လူတွေနဲ့ အမြဲပြန်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတဲ့ ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီ။ အလုပ်ထွက်ခွာနီး ဝန်ထမ်းက ချိုးသွားတဲ့ အချိုးကို ကြည့်ပြီး အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ကို နောက်ထပ်ဆိုတဲ့ ဘာအခွင့်အရေးမှ မပေးတော့တာမျိုး ဆိုရင် ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကပဲ နစ်နာမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာရမှာပါ။
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကြောင့် မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာ အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အခက်အခဲတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နဲ့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး အကျိုးရှိစေမယ့် တစ်ရက်ပြတ်သင်တန်းတစ်ခုကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ CCS Training ပါပဲ။ CCS ဆိုတာက Consumer Care Service Training ဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေ(၁၅၀)ကွက်တိဖြင့် ကန့်သတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ YTS Company က လုပ်တဲ့ Training တွေကို မြိတ်မြို့မှာ တက်ရောက်သူ(၁၀၀၀)ကျော်ထိ တက်ရောက်ထားပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါလုပ်မယ့် Training က တော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ Training ဖြစ်လို့ ယခင်တက်ရောက်ဖူးထားသူများ ပြန်လည်စာရင်းပေးသွင်းမှုများ ရှိနေပါသဖြင့် အမြန်ဆုံး စာရင်းသွင်းထားလိုက်နော်။
Date: 29-12-2019 (Sunday)
Address: Regent Hotel
နေ့လယ်စာ၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ လက်ဆွဲအိတ်၊ ရေသန့်၊ ဂိမ်းတွေနဲ့အတူ Performance လုပ်ဆောင်မှုတွေပါဝင်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး – 17500 ကျပ်
Contact Center: 09684441008, 09975996400, 09779799919
No(B-226+227), Seaview Mall, Myeik
Modelဇွဲ မှ ဒီ Training မှာ Presenter အဖြစ် ပါဝင်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…..
Youth Training School ကနေ လုပ်တဲ့ Training တွေကို တက်ဖူးသူတိုင်း ဘယ်လို Suprise အစီအစဉ်တွေပါလဲ ဆိုတာ သိပါတယ်နော်….လာမယ့် December 29 မှာ ပြုလုပ်မယ့် CCS Training မှာ လဲ CRUSH DANCER GROUP ရဲ့ ENTERTAINMENT ဖျော်ေ အစီအစဉ်တွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်နော်….CCS Training ဆိုတာက Consumer Care Service Training ဖြစ်ပြီး Trainer ရဲ့ သင်ကြားပေးမှုတွေနဲ့ တစ်ရက်တာ သင်တန်းကို ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…..
လုပ်ကိုင်နေ သော တခြားသောလုပ်ငန်းများ
တရုတ်စာ သီးသန့် မဟုတ်ဘဲ
အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကို ဖတ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံပေး လမ်းညွှန်မှုတွေလဲ လုပ်ပေးပါသည်။
+09 975 996 400